ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၂)ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဇန်န၀ါရီလအတွက် (၇)နေ့ ဗေဒင်
# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၃) »
# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၂)Published January 13, 2010 | By dr.tin bo bo	ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ အပိုင်း (၁)ကို ဖတ်ပြီး “ဘာလဲဟ၊ ဘာလဲဟ” ဆိုပြီး ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်နေကြတဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ် များကို ရှေးဦးစွာ တောင်းပန်လိုပါတယ်။ တမင်သက်သက် အချိန်ဆွဲထားတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီယတြာကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေပြီး လက်တွေ့ အကျိုးထူးများခံစားနေရပေမယ့် ဒီလို သိပ်ကောင်း ပါတယ်ဆိုတာ အခြားသူ တွေ လက်ခံလာအောင် (စာနဲ့) ရှင်းပြရတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
ဒီ “Life Style” နဲ့သာ ကျင့်သုံးနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင် ဘ၀ဟာ ယတြာချေဖို့ မလိုလောက်အောင် ချောမွေ့သာယာလာမှာမို့ “ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ” လို့ တင်စားလိုက်တာပါ။
တစ်ချို့လည်း ကျင့်သုံးမှန်းမသိ ကျင့်သုံး နေမိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိမထားမိကြဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ က တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အဆင်ပြေလာတယ်။ ပြဿနာတွေ နည်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး။ ဒီလို ဘာကြောင့်မှန်း မသိတာလည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ပုထုဇဉ်လူသားများပီပီ အဆင်ပြေချောမွေ့လာတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀/ ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာ သာယာလာပြီး “Life Style” အဟောင်းဘက်ကို ပြန်ရောက် သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ အဆင်မပြေမှု၊ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေ ပြန်ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နှစ်အတော်ကြာအောင် ကျင့်သုံးမှန်းမသိ ကျင့်သုံးနေပြီး “သြော်- ဒါကြောင့်ပါလား”- လို့ သိလိုက်ရတာ (၁၅)ရက်လောက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ သိ, သိခြင်းဘဲ ကိုယ့်အသိလေးကို ၀မ်းသာအားရ ပြန်လည် မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ကြိုပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပြမယ့်အကြောင်းဟာ လုံးဝ,လုံးဝ အသစ်အဆန်း ဖြစ်တဲ့ နည်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကမ္ဘာ့ လူသားတွေကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာတရားအတော်များများမှာ သင်ကြားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက မသိကြဘူး။ ကမ္ဘာ့ ဘာသာတရားကြီးတွေကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ “ဗုဒ္ဓ” “ယေရှု” “တမန်တော်မိုဟာမက်” တို့ထက် ပိုသိတယ်, တတ်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့သူတွေကြောင့် “ဒီ တရား” ဟာ တိမ်မြုတ် နေရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် တစ်ခုတောင်းပန်ချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ဗုဒ္ဓ” “ယေရှု” “တမန်တော်မိုဟာမက်” တို့ထက် ပိုသိတယ်, ပိုတတ်တယ်လို့ ယူဆ ထားတဲ့သူတွေ ဒီဆောင်းပါးကို ဒီနေရာကနေ ဆက်မဖတ်ကြပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကုန်ပါတယ်။ တကယ် စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။
စာဖတ်သူများ ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် စကားပလ္လင်ခံနေတာတွေလည်း များနေပါပြီ။ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်နေတဲ့ သူတွေလည်း “ဘာလဲ” ဆိုတာ သိချင်လှပြီ။ ခွင့်လွှတ်ပါ။ တမင်လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ စကားမို့ “ဂုဏ်တင်ပေးနေတယ်” မှတ်ပါ။ ပေါ့ပေါ့လေး ပြောလိုက်ရင် ပေါ့ပေါ့လေးဘဲ ထင်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
ကျွန်တော် ပြောပါတော့မယ်။ သေသေချာချာဖတ်ပါ။ ဖတ်ပြီးရင် သေသေချာချာ ပြန်တွေးပါ။ ပြီးစလွယ် မှတ်ချက် မချလိုက်ပါနဲ့။ အားလုံးအပေါ်မှာ ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာကြောင့်ပါ။ ဘာလဲဆိုတော့-
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘ၀ ရှေ့အနာဂါတ်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်၊ ကိုယ်ရချင်တဲ့ - ရည်မှန်းချက်၊ ကြံရွယ်ချက်၊ ဘ၀စီမံကိန်း၊ မျှော်လင့်ချက်၊ ဓနဥစ္စာ ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုမှု၊ ရာထူးအာဏာတိုးတက်ရယူလိုမှု . . . အစရှိတဲ့ အရာတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေတစ်ခုမှ မရှိသူဟာ “အရိယာ သူတော်ကောင်း စစ်စစ်” များဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ မဖြစ်ရင် “ရူးသွပ်နေသူ” ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျန်သူအားလုံးမှာ ရှိကြပါတယ်။ လက်ခံပါရဲ့လားခင်ဗျာ။
ဟုတ်ပါပြီ။ လက်ခံတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဆက်ပြောပါမယ်။ ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ (တနည်း) ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး Life Style ကတော့ အခြားမဟုတ်ပါ။ အဲဒီ ကိုယ့်သဏ္ဍန်မှာ ရှိတဲ့ အနာဂါတ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ ကြံရွယ်ချက်၊ ဘ၀စီမံကိန်း၊ မျှော်လင့်ချက်၊ ဓနဥစ္စာ ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုမှု၊ ရာထူးအာဏာ တိုးတက်ရယူလိုမှု . . . အစရှိတဲ့ “လောဘ, လိုချင်ခြင်း” တရားတွေကို အပြီးအပိုင် စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ ။ ဆုပ်ကိုင် ထားရာကနေ လွှတ်ချ ပစ်လိုက်ပါ။ လုံးဝ မေ့ပျောက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ့်ဘ၀ကို “မျှော်လင့်ခြင်း၊ လိုချင်ခြင်း၊ တောင့်တခြင်းများ . . . ကင်းမဲ့စွာ” နဲ့ ဆက်ပြီး ရှင်သန်ဖို့ပါဘဲ။
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြီး ပြောပါဦးမယ်
. . ကိုယ့်သဏ္ဍန်မှာ ရှိတဲ့
. . အနာဂါတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
. . ရည်မှန်းချက် , ကြံရွယ်ချက် , ဘ၀စီမံကိန်း၊
. . မျှော်လင့်ချက် , ဓနဥစ္စာ ချမ်းသာကြွယ်ဝလိုမှု , ရာထူးအာဏာတိုးတက်ရယူလိုမှု . . .
. . အစရှိတဲ့ “လောဘ, လိုချင်ခြင်း” တရားတွေကို အပြီးအပိုင် စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ။
. . ဆုပ်ကိုင်ထားရာကနေ လွှတ်ချ ပစ်လိုက်ပါ။ လုံးဝ မေ့ပျောက်လိုက်ပါ။
. . ပြီးရင် ကိုယ့်ဘ၀ကို “မျှော်လင့်ခြင်း၊ လိုချင်ခြင်း၊ တောင့်တခြင်းများ . . . ကင်းမဲ့စွာ” နဲ့ ဆက်ပြီး ရှင်သန်ဖို့ပါဘဲ။
သင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါသလဲ ?
(၁) ကိုယ်ထင်တာနဲ့ တခြားစီဖြစ်သွား ပါသလား ။ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် မအံ့သြပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်နဲနဲ ရှည်ရှည်ထားပြီး ဆက်ဖတ်ပါဦး။
(၂) “လူ့ဘ၀ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဆန့်ကျင်နေလို့ ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆ လိုက်ပါသလား။ အနာဂါတ် စီမံကိန်းတွေ မရှိဘဲ ဘယ်လိုလုပ် အလုပ်လုပ်လို့ရမလဲလို့ ပြောချင်ပါသလား။ ဒီလို ယူဆတယ်/ ပြောချင်တယ် ဆိုရင်လည်း စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဆက်ဖတ်ပါဦး။
(၃) ဒါမှ မဟုတ် “ဒါများ ငါ, သိပြီးသားပါကွာ” ဆိုတဲ့ စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဆက်ဖတ်ပါလို့ ကျွန်တော်မတောင်းဆိုတော့ပါ။ ဒီလို လူမျိုးအတွက် ဒီဆောင်းပါးကို ဆက်ဖတ်စရာ မရှိတော့ပါ။ “ငါ သိပြီးသားပါကွာ” ဆိုသူဟာ “လုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ အရိယာ သူတော်ကောင်းတစ်ဦး” ဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မဖြစ်ရင်လည်း “လောကီနယ်မှာ အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ဘ၀တစ်ခု” ကို ပိုင်ဆိုင်နေသူ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ “ငါ သိပြီးသားပါကွာ” ဆိုပြီး ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေသူဟာ တကယ်မသိသေးသူသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့တော့ ကျွန်တော်ပြိုင်ပြီး မငြင်းလိုတော့ပါ။
ကျန်တဲ့ လူတွေအတွက် ကျွန်တော် ဆက်ပြောပါမယ်။ ဒီလို မျှော်လင့်ချက်တို့၊ ဘ၀စီမံကိန်းတို့ မရှိဘဲ အလုပ်ကို ဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့ရမှာလဲလို့ တစ်ချို့က ပြောကြမယ်။ ဘာလို့မရ ရမှာလည်း။ ကိုယ်လုပ်လက်စ၊ လုပ်နေကြ အလုပ်တွေကို ဘာမှ ရပ်ဆိုင်းစရာမှ မလိုတာ။ မနေ့က လုပ်ခဲ့သလိုဘဲ ဒီနေ့, မနက်ဖြန် ဆက်လုပ်သွားရုံဘဲ။ ဘာမှ မထူးခြားပါဘူး။ ကိုယ့် သဏ္ဍန်ထဲမှာ ရှိတဲ့ “လောဘ” ဆိုတဲ့ တရားကို ဖြုတ်ချထားလိုက်ရုံ ပါဘဲ။ ကျန်တာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အတိုင်း လုပ်သွားလိုက် ရုံပါဘဲ။
ဒီတော့ ဒီအဆိုပြုချက်ကို မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေ သာဓကတွေနဲ့ တင်ပြပါ့မယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ဒီအဆိုပြုချက် ကို တင်ပြတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကနေ စ,ပါမယ်။
သက်သေ သာဓက (၁)
ကျွန်တော့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို အကျဉ်းချုံး တင်ပြပါမယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မွေးဖွားလာစဉ်က ချမ်းသာသော မိဘ များမှ ပေါက်ဖွားလာသူပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အလယ်တန်းကျောင်းသားလောက်ကစ,ပြီး မိဘများရဲ့ စီးပွားရေးဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာပါတယ်။ နောက်ဆုံး တက္ကသိုလ် ပြီးခါနီးနှစ်တွေမှာ မလောက်မင ကျောင်းလခလေးနဲ့ ကျောင်းပြီးအောင် ချို့ငဲ့စွာ တက်ခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရဲ့ အကူအညီသာ မရရင် ကျောင်းတောင်မှ ထွက်ရမယ့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ခံစားခဲ့ရမှုကြောင့် ဘွဲ့ရပြီးချိန်မှာ “ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘ၀တစ်ခု” ကို ရရှိဖို့ သံဒိဋ္ဌာန် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၅ ခု ဘွဲ့ရချိန်ကစ,ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ (၁၃)နှစ်လုံးလုံး “ဆီစက်လုပ်ငန်း၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်း၊ ကျူရှင်ဆရာ၊ ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ နယ်စပ်ကုန်သည်၊ ကုန်ကား လုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုရဲ့ G.M ၊ သစ်ကုန်သည်လုပ်ငန်း” များကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လုပ်ငန်းမှ (၂)နှစ် မခံပါဘူး။ (ဇာတာထဲမှာလည်း ဒီလိုဘဲ ပါ,ပါတယ်)။ လုပ်သမျှ လုပ်ငန်းတိုင်းဟာ အစပိုင်း ကောင်းပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပျက်စီး သွားရတာချည်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မမှုပါဘူး။ အသက်ကလည်းငယ်တုန်း၊ ဇွဲကလည်းအလွန် ကောင်းတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပျက်ရင် နောက်တစ်ခု ပြန်စပြီး “ချမ်းသာရမယ်” ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုတော့ အသေဆုပ်ကိုင် ထားမြဲပါ။
နောက်ဆုံး ၁၉၉၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးချိန်မှာ “သစ်ကုန်သည်”ဘ၀နဲ့ ကိုယ်ပါ ကြားညပ်ပြီး ရှိသမျှ စီးပွားဥစ္စာ အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ကုန်းကောက်စရာ မကျန်အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ လူလည်း ကျန်းမာရေး ဂျုန်းဂျုန်းကျ သွားပါတယ်။ ဘ၀မှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ လောကဓံကြီးကို ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ပါ။ ဒီလောကဓံကြောင့် “ငါဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝရတော့မယ့် ကံဇာတာ လုံးဝမရှိသူ” လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကိုယ်ဝါသနာအလျှောက် လေ့လာခဲ့တဲ့ ဗေဒင်ပညာလေးနဲ့ ဘ၀ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်စ, ခဲ့ရပါတယ်။ “ထမင်းစားရရင် တော်ပါပြီ” ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ စ,ခဲ့တာပါ ။ ချမ်းသာကြီးပွားချင်တဲ့ စိတ်တွေကို အားလုံး “ခ၀ါချ” ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အလုပ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကလည်း ချမ်းသာနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗေဒင်ပညာနဲ့ တိုက်ဆောက်၊ ကားစီးနိုင်သူ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ ဗေဒင် ဆရာ အများစုဟာ ၀မ်းဝရုံ၊ ခါးလှရုံလောက်ထက် မပိုကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီလို “ထမင်းစားရရင် တော်ပါပြီ” ဆိုပြီး စ, လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ဟာ တစ်လထက်, တစ်လ၊ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် တိုးတက်အောင်မြင်လာပါတယ်။ ၀မ်းဝရုံမျှ ရည်မှန်းချက်နဲ့ စ,ခဲ့တဲ့ အလုပ်ဟာ ၀မ်းဝရုံ၊ ခါးလှရုံမျှမက ပိုပိုလျှံလျှံ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားဘ၀တုန်းကလို ၀င်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်း အလုံးလိုက် အခဲလိုက်၊ ထွက်သွားပြန်ရင်လည်း အလုံးလိုက် အခဲလိုက် မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ “ပုံမှန်ဝင်ငွေ” လေးနဲ့ ဘ၀ဟာ တည်ငြိမ် နေပါတယ်။
စီးပွားရေးသမားဘ၀တုန်းက တစ်လထဲမှာကို တက်လိုက်ကျလိုက်၊ ဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေး “ဂရပ်မျဉ်းကြောင်း” ဟာ၊ ဗေဒင် ပညာရှင်ဘ၀မှာ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် အကျဆိုတာ မရှိတော့ဘဲ ခပ်ပြေပြေလေးဘဲ တက်နေပါတော့တယ်။ အရင်တုန်းက (၂)နှစ်ကို တစ်ခါလောက် အလုပ်ပြောင်းရတဲ့ ဘ၀မျိုးကနေ အခု(၁၂)နှစ်တာကာလအထိ ရောက်လာအောင် အလုပ်တည်မြဲမှု ကို ခံစားနေရပါတယ်။ စိတ်လည်း အလွန် ချမ်းသာလာပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒုက္ခတွေ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ အမြဲရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်းမျိုးထက်၊ ဒုက္ခပြဿနာတွေမရှိတဲ့ ဘ၀မျိုး/အဆင်ပြေနေမှုမျိုးက “ပိုပြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာ” ကိုယ်တွေ့ သိရှိလာပါတော့တယ်။ လူဘ၀ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု ဟာ ငွေကြေးပမာဏက အဓိကမကျတာကို နားလည် လာပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်လောက်ကစပြီး ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်က (၅၀)နားကို ချည်းကပ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်မျက်စေ့အောက်မှာ “ဖြုတ်ကနဲ၊ ဖြုတ်ကနဲ” လောကကြီးထဲကနေ အစီအရီ ထွက်ခွာသွားနေရတဲ့ ကိုယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူ တွေကို ကြည့်ပြီး အလွန်ထိတ်လန့်စိတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ သြော်- ကိုယ်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန် နီးကပ် လာပါပြီးကော ဆိုပြီး “သံဝေဂစိတ်” ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဟိုတုန်းကတည်းက “ခပ်ကြဲကြဲ လုပ်လိုက်” “မလုပ်လိုက်” ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၀ိပဿနာကို ဖိ,ပြီး လုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ စီးပွားရေး အပေါ်မှာ သံယောဇဉ်သိပ်မထားတော့ပါဘူး။
ဒီလို ၀ိပဿနာတရားကို ဖိလုပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ သဏ္ဍန်မှာ “ကြီးပွားချင်စိတ်၊ ချမ်းသာချင်စိတ်” ဆိုတဲ့ လောဘတရားဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ နည်းပါးလာခဲ့ပါတယ်။ “လောဘ တဏှာ” ရဲ့ စေခိုင်းမှုကြောင့် ကိုယ် ချမ်းသာဖို့၊ သားမယားတွေ ကောင်းစားဖို့ မမောနိုင်မပန်းနိုင် ရှာဖွေခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီးကို ပိုပြီး ရိပ်မိလာပါ တော့တယ်။ ဘယ်လောက် ကြိုးစား ရှာရှာ၊ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ရှာခဲ့သမျှအားလုံးကို ထားရစ်ခဲ့ရမှာဘဲဆိုတာ ပိုပြီး သဘောပေါက်လာပါတယ်။ လူ့ဘောင်ကို အပြီးအပြတ် စွန့်ခွာပြီး တရားအားထုတ်ချင်စိတ်များသာ ပိုများလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စီးပွားရေးကို လုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ဘဲ စာရင်းဇယားများကို ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ လွှဲအပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်က ကိုယ့်ရှေ့ကို ရောက်လာတဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို စိတ်ကောင်းစေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်ပေးတာဘဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျန်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စာရင်းဇယား စသည်တွေကို လုံးဝ လှည့်မကြည့်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ဝင်မလုပ်ရင် မဖြစ်တဲ့ အလုပ် အနည်းငယ်မျှလောက်ကိုသာ လုပ်ပေးပါတော့တယ်။
အဲဒီမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးဟာ သတိထားမိလောက်အောင်ကို တိုးတက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်က စာရင်းဇယား ကို မကြည့်ဘူးဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရှေ့မှာရောက်လာတဲ့အလုပ်(ရင်သွေးနာမည်ပေးခြင်း) များဟာ ယခင်နှစ်များထက် သိသိ သာသာ များလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးက ကလေးတွေမွေးသမျှ ကျွန်တော့်ဆီမှာဘဲ စုပြုံမေးနေသလား လို့တောင်မှ ထင်ရပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ယခင်စိတ်နှင့်ဆိုလျှင် ဒီလို လုပ်ငန်းတိုးတက်တာကို အလွန်သာယာဝမ်းမြောက်မိမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ သာယာစိတ်လည်း မရှိတော့ပါ။ “ဖောက်သည်များလေ၊ ပိုပင်ပန်းလာလေ” လို့ဘဲ ခံစားရပါတော့တယ်။ စီးပွားကို ပင်ပင် ပန်းပန်း ရှာရတာကိုဘဲ “အပြစ်တစ်ခု” လို့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ထင်မြင်လာပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလို တစ်မဟုတ်ခြင်း ဘာလို့ တိုးတက်လာရသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် အဖြေရှာကြည့်ပါတယ်။ အစကတော့ ၀ိပဿနာကြောင့်လို့ဘဲ ထင်မြင်ယူဆနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ၀ိပဿနာလုပ်နေရင်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေကို တွေ့လာရ ပြန်တော့လည်း ပြန်ပြီး အဖြေရှာရပြန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်လောက်က လောကီ လောကုတ္တရာ စွယ်စုံရတဲ့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကနေ အဖြေရလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ အဖြေကတော့ “မိမိလုပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းကို လောဘ မပါတဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြဖို့ပါဘဲ”၊ “အကျိုးမျှော်တဲ့ စိတ်နဲ့ အလုပ်မလုပ်ကြဖို့ပါဘဲ”၊ “အနာဂါတ်ရည်မှန်းချက်” “အိပ်မက်” ဆိုတာတွေကို ကိုယ့်နှလုံးသားထဲကနေ ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ဖို့ ပါဘဲ”။
စာဖတ်သူဟာ- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ထမ်းလုပ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရယူ ထားတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ပစ္စည်း၊ လုပ်အား၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို “လောဘမပါတဲ့ အကြောင်းတရား သက်သက်နဲ့” ပြန်လည် ပေးဆပ်ခြင်းသည်သာ “ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးယတြာပါဘဲ” “ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး Life Style ပါဘဲ” ။ နောက်ထပ် သက်သေ သာဓကတစ်ခု တင်ပြပါဦးမယ်။
သက်သေ သာဓက (၂)
မန္တလေးမြို့က နာမည်ကျော် “အရီးတောင်း လဘ္ဘက်သုပ်” ဆိုတာ လူတိုင်း ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လဘ္ဘက်သုပ် လုပ်ငန်းနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြတဲ့ မိသားစုပါ။ အရီးတောင်း လဘ္ဘက်သုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း အနှစ်(၂၀)(၃၀)လောက်က ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (ခုနှစ်အတိအကျ ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါ)။
အဲဒီ တစ်နှစ်မှာ မန္တလေးမြို့မှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေတွေ အရမ်းကြီးလာပါတယ်။ မြို့ထဲကို ရေတွေ ၀င်လုနီးပါးဖြစ်လာပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကနေ အသံချဲ့စက်နဲ့ မြစ်အနီးရပ်ကွက်တွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကို အဆင့်သင့်အနေအထား ရှိကြဖို့ ရွှေ့ပြောင်းဖို့လိုရင် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သတိပေးချက်တွေနဲ့ ဆူညံနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မန္တလေးမြို့တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ “ကြက်ခြေနီလူငယ်” များဟာ မြစ်ရေ မြို့အတွင်းဝင်လာတာကို တားဆီးဖို့ သဲအိတ်တွေနဲ့ ကာဆီးရန် အားလုံးစုဝေး ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ကြက်ခြေနီလူငယ်တွေနဲ့ မြစ်အနီးက ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားတွေ ပူးပေါင်းလိုက်ကြပြီး သဲအိတ်များဖြင့် မြစ်ရေကို တားဆီးဟန့်တားဖို့ နေ့မနား၊ ညမနား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညဖက်တွေမှာပါ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် မအိပ်စက် ကြတော့ဘဲ တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ကြက်ခြေနီလူငယ်များကို မြင်ရတဲ့အခါ မြို့လူထုက အလွန် နှစ်ထောင်းအားရ ရှိလှတာမို့ ထမင်း၊ ဟင်း နှင့် အစားသောက်များ ကို လာရောက်ဝေငှလှူဒါန်းကြပါတော့တယ်။
အဲဒီမှာ စောစောက “အရီးတောင်းလဘ္ဘက်” မိသားစုက ကြက်ခြေနီလူငယ်များအတွက် “လဘ္ဘက်သုပ်” နဲ့ ဒါနပြုဖို့ စီစဉ် ကြပါတယ်။ ညဖက်မှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ လူငယ်များ အိပ်ချင်လည်းပြေ၊ လန်းလန်းဆန်းဆန်းလည်း ရှိသွားအောင် ဆိုပြီး လဘ္ဘက်သုပ်တစ်မျိုးကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန် ဈေးကွက်ထဲက လဘ္ဘက်သုပ်များနဲ့ မတူတဲ့ ချဉ်ချဉ် ငန်ငန် စပ်စပ် ဆိုတဲ့ လဘ္ဘက်သုပ်ကို တီထွင်ပြီး ကြက်ခြေနီ လူငယ်တွေကို အများအပြား လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလဘ္ဘက်သုပ်ဟာ ရေဘေး ကာကွယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကြက်ခြေနီလူငယ်တွေကြားမှာ အတော်လူကြိုက်များပြီး ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ပြီးရော ဒီလဘ္ဘက်သုပ်ကို ကြက်ခြေနီလူငယ်တွေနဲ့ ပက်သက်နေ တဲ့ ပြည်သူတွေက ပြန်လည်တောင်းဆိုမှုကြောင့် “ဈေးကွက်” ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ “အရီးတောင်း ကြက်ခြေနီသုပ်” လို့ နာမည်တွင်ပါတယ်။ ဒီအရီးတောင်း “ကြက်ခြေနီ” သုပ်ဟာ ဘယ်လောက် ရောင်းကောင်းလိုက်သလဲ ဆိုရင် ဒီအသုပ် တစ်မျိုးထဲ နဲ့ဘဲ အရီးတောင်းမိသားစုရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ အဆပေါင်းများစွာ “ထိုးတင်လိုက်သလို” တက်သွား ပါတော့တယ်။
စဉ်းစားကြည့်နော်။ သူတို့ဟာ ဒီလဘ္ဘက်သုပ်ကို တီထွင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ “ဘာအကျိုးအမြတ်ကိုမှ မျှော်ကိုးမထားဘူး” “ဘာ လောဘမှ မပါဘူး” “ဈေးကွက်မှာ တင်ဖို့လည်း ရည်ရွယ် လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး” “ကြက်ခြေနီလူငယ်တွေ စိတ်လန်းဆန်း အပန်းပြေသွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့သာ အကျိုးမမျှော်ဘဲ လုပ်ခဲ့တာပါ”။ ဒါပေမယ့် ဒီလဘ္ဘက်သုပ်ကြောင့် သူတို့ စီးပွားရေး အကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ (လောဘ မပါဘဲ၊ အကျိုးမမြတ်မတွက်ဘဲ . . အလုပ်လုပ်လို့ မရဘူးလို့ ထင်သူများ အတွက် စဉ်းစားစရာပါ)
စာဖတ်သူ အင်တာနက်ထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ ဘယ် Search Engine ကို သုံးပါသလဲ။ အများစုကတော့ Google ကိုဘဲ သုံးကြမှာပါ။ အီးမေးလ်ဆိုရင်လည်း G-mail ကိုဘဲ သုံးကြသူများပါတယ်။ Chatting ဆိုရင်လည်း G-talk ကိုဘဲ အသုံးများကြပါတယ်။ ကျွန်တော် သုံးဖူးသလောက်တော့ Google လောက် အဆင်ပြေတာ မရှိပါဘူး။ ယနေ့အချိန်မှာ Google ကုမ္ပဏီဟာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဧရာမကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီ Google ဆိုတဲ့ Search Engine ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားနှစ်ဦးရဲ့ အထုပ္ပတ္တိလေးကိုများ ကြားဖူးပါရဲ့လား။
ကမ္ဘာမှာ အင်တာနက်တွေ စတင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာချိန်မှာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေမှာ အခက်အခဲတစ်ခု ရှိလာပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ Web Address တွေကို ရှာရာမှာ အလွယ်တကူ ရှာလို့မရတာပါဘဲ။ ဒါကို သတိပြုမိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “လယ်ရီ ပေ့ခ်ျ” နဲ့ “ဆာဂျီ ဘရန်” တို့ဟာ လူတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေမယ့် Search Engine တစ်ခုကို စပြီး တီထွင်ကြပါတော့တယ်။
ဘာအကျိုးအမြတ်ကိုမှ မမျှော်မှန်းခဲ့ကြပါဘူး။ Free Search Engine တစ်ခုပါ။ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တီထွင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီတီထွင်မှုကနေ ဧရာမ အကျိုးအမြတ် ရလာလိမ့်မယ်လို့ အိပ်မက်တောင် မမက်ခဲ့မယ် မထင်ပါဘူး။ လူတိုင်း “အခမဲ့” သုံးစွဲနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ယနေ့ထိအောင် ကမ္ဘာ့ လူသားအားလုံးကို G-mail, G-talk , Google Search များကို အခမဲ့ သုံးခွင့် ပြုထား ပါတယ်။ ယနေ့ အချိန်မှာ G-mail, G-talk များကို လူတိုင်းလောက် သုံးစွဲနေကြပေမယ့် “အခမဲ့ သုံးစွဲ” ခွင့် ရထားတာကိုတော့ သတိပြုမိသူ နည်းပါတယ်။
ဒီလို ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကို မမျှော်မှန်းခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းပေါင်းများစွာက အသုံးပြု လာကြတဲ့အချိန်မှာ Search Engine တွေရဲ့ Page တွေထဲကို ၀င်ရောက်ကြော်ငြာလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ကြော်ငြာခငွေကြေးတွေဟာ အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်လာပါတော့တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ Google ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ ဘီလီယံပေါင်း များစွာ ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ “ကဲ – ငါတို့နှစ်ယောက် ဘီလီယံနာ ဖြစ်မယ့် လုပ်ငန်း တစ်ခုကို စ,လိုက်ကြရအောင်လား” လို့ ရည်ရွယ်ပြီးသာလုပ်ခဲ့ရင် ဒီလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ဒါဟာ “လောဘ နဲ့ အကျိုးအမြတ်” ကို လုံးဝထည့်မတွက်ခဲ့ဘဲ စ,လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။
ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့ရဲ့ အမေး/အဖြေကဏ္ဍထဲကို လူငယ်တစ်ယောက် ၀င်မေးပါတယ်။ “ဆရာခင်ဗျား- ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ ကြံရွယ်ပြီး လုပ်တဲ့ အလုပ်အားလုံးဟာ ဖြစ်မလာဘဲ၊ မကြံရွယ်တဲ့ အလုပ်တွေက အောင်မြင်နေတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ” တဲ့။ သူ့စကားကို ကျွန်တော် ပြန်ပြင်ရေးပြပါ့မယ်။ “ဆရာခင်ဗျား- ကျွန်တော့ဘ၀မှာ လောဘကြီးကြီး နဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေအားလုံးဟာ ဖြစ်မလာဘဲ၊ လောဘ မပါတဲ့ အလုပ်တွေက အောင်မြင်နေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ” လို့ ပြင်ရေးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးဟာ သူတစ်ယောက်တည်းမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ဘ၀ကို ပြန်ပြီး ငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်ပါ ။ ဒီလို ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်မပါဘဲ အမှုမှဲ့ အမှတ်မဲ့ လုပ်လိုက်တာကနေ အဆင်ပြေ လာတာတွေ ရှိခဲ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သတိမထားမိဘူး။ သတိမထားမိတဲ့အပြင် အပေါ်က လူငယ်လို “လောဘ မပါဘဲ လုပ်တာကိုဘဲ အောင်မြင်ရကောင်းလား” လို့ အပြစ်တင်ချင်နေကြတယ်။
လူတွေဟာ “လောဘတို့” “ရည်မှန်းချက်တို့” “ကြံရွယ်ချက်တို့” “အကျိုးအမြတ်” တို့ မပါတော့ရင် အလုပ်ကို မလုပ်တတ်ကြတော့သလို ဖြစ်နေကြပါတယ်။
“အကျိုးတရားကိုသာ အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ လိုက်ရှာနေကြပြီး တကယ်အရေးကြီးတဲ့ “အကြောင်းတရား” ကို ပေးဆပ်ဖို့ မေ့နေကြပါတယ်။ တစ်ချို့က ပြောကြသေးတယ်။ မတော်လောဘ မထားရင် ပြီးတာဘဲ တဲ့။ ထိုက်သင့်တဲ့ လောဘ တော့ ရှိရမှာပေါ့ တဲ့။
တကယ်တော့ “မတော်လောဘ” ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ “တော်လောဘ” ဘဲဖြစ်ဖြစ် လောဘ ဟာ လောဘပါဘဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်ဘာသာတရားကမှ “လောဘဆိုတာ ကောင်းတယ်ကွ” လို့ မသင်ကြားခဲ့ကြပါဘူး။ “ဗုဒ္ဓ” ၊ “ယေရှုခရစ်”၊ “မိုဟာမက်” တို့ရဲ့ သင်ကြားချက်တွေမှာ လောဘတရားကို အပြစ်ဒုစရိုက်လို့သာ ဟောကြားခဲ့ကြတာချည်းပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေက လူလည်ပြန်လုပ်ကြတယ်။
“ဘုရားအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုကို လောဘနဲ့ ရောထွေးပစ်လိုက်ကြတယ်”။ ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ရင် အောင်မြင်ရမယ်ပေါ့။ (အမှန်ကတော့ “လောဘ” ဆိုတဲ့ ဆင်သေကို “ယုံကြည်မှု” ဆိုတဲ့ ဆိတ်ရေနဲ့ ဖုံးဖို့ ကြိုးစားကြတာပါ)။
ဗုဒ္ဓ နဲ့ ဘုရားသခင်တွေ လိုလားတဲ့ ယုံကြည်မှု ဆိုတာ “ရွှေငွေဥစ္စာတွေ၊ စည်းစိမ်တွေ၊ တန်ခိုးအာဏာတွေ၊ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားမှုတွေ” လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ သေသေ ချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ မိတ်ဆွေ ။
ကဲ- ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်ပါတော့မယ်။ မပြီးသေးပါဘူး။ အပိုင်း (၃)လာပါဦးမယ်။ ဘ၀အတွက် ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမို့လို့ သိပ်အတိုချုံးပြီး ရေးလို့မရပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးပါ အချက်ကတော့ “အဓိက” အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လောဘကို သတ်နိုင်ဖို့က အဓိကအကျဆုံးပါ။ နောက်ဆောင်းပါးမှာ ဆက်ရေးမှာက ဒီ အဓိကကျတဲ့ “လောဘ” တရားရဲ့ ပယ်သတ်ရာမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ့် တရားတွေကိုသာ ဆက်ပြီး တင်ပြမှာပါ။
“လောဘကို အောင်နိုင်မှ လောကကို အောင်နိုင်မည်” တဲ့။ ကျွန်တော့်စကားမဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်ငယ်သော်လည်း ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်ပြီး ဘုန်းတန်ခိုး၊ လာဘ်လာဘ အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ “မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာဆရာတော် အရှင်ဇ၀န” ရဲ့ စကားပါ။ ရွှေပြည်သာ ဆရာတော်ဟာ “ညာဘက်လက်က ၀င်လာတဲ့ လာဘ်လာဘကို ဘယ်ဖက်လက်ကနေ (ချက်ခြင်း) စွန့်လွှတ် နိုင်သူပါ” ။ ဒီလို လုပ်လေ “လာဘ်လာဘဟာ မလိုချင်လောက်အောင် ရလေလေ” ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
နားပါဦးမည်။ အပိုင်း(၃)ကို ဆက်မျှော်ပါ။ (အမှန်ကတော့ ကနေ့ဆောင်းပါးကတင် လုံလောက်နေပါပြီ။ သဘောပေါက် ရင်ပေါ့လေ)။ နောက်ဆောင်းပါးမှာ “လောဘ” နဲ့ အတူယှဉ်တွဲဖြစ်တတ်တဲ့ “ဣသာမစ္ဆရိယ နဲ့ မာန” တရားနှစ်ခုကို တင်ပြ ပါဦးမယ်။ နောက်ဆုံးမှ ဒီ “လောဘ ၊ ဣသာမစ္ဆရိယ နဲ့ မာန” တရားတွေကို “၀ိပဿနာ ပညာ” နဲ့ အပြီး ချုပ်ကိုင် သတ်ဖြတ် ပစ်ဖို့ကို ဆက်ပြီး တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(တရားမဟောပါ၊ အဆင်ပြေချောမွေ့သော ဘ၀တစ်ခုကို ရရှိခံစားစေရန် နည်းလမ်း မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ဆရာကြီး မဟုတ်ပါ၊ လူတတ်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါ၊ ကိုယ့်ထက် သိတဲ့ တတ်တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါသည်။ သို့သော် “ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ” ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ်တိုင် ကောင်းကျိုးခံစားနေရသလို သူများတွေလည်း ခံစား စေလိုသော ဆန္ဒ တစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးပါစေဟူသော စိတ်ဆန္ဒ လုံးဝမရှိ။ ဤ မှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ယခုဘ၀၌ပင် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါစေသတည်း)
ဖတ်ရှုသူအားလုံး နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေ ဟု ဆုမွန်များစွာဖြင့် -
Posted in ဘ၀ ဒဿန | Tagged Best Life Style, ဗုဒ္ဓ ဒဿန, ဘ၀ ဒဿန, ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ, ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ . . အပိုင်း (၄), အတွေးအမြင်	53 comments on “# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၂)”	Kelvin Power on January 14, 2010 at 12:32 am said:
တွေ့ အကြူံ တွေကိုဝေမျှတဲ့အတွက်အင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Dr.Tin Bo Bo on January 14, 2010 at 12:54 am said:
ko Kelvin ရေ
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားတွေကတော့ အဆင့်မြင့်လွန်းပါတယ်။ လောကီကို လွန်မြောက်သွားပါပြီ။
ကျွန်တော့် ပြောချင်တာက ဒီလောက်လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ လောကီထဲမှာဘဲ နေရင်းထိုင်ရင်း၊ လုပ်ရင်း ကိုင်ရင်းနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခု ရနိုင်ဖို့သာ လိုရင်းပါ။
လောကီကို စွန့်စရာမလိုပါဘူး။ “လောဘ” ကိုသာ စွန့်ရမှာပါ။ အလုပ်လုပ်လို့ ရတယ်။ စီးပွားရှာလို့ရတယ်။ အိမ်ယာတည်ထောင်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ လိုချင်မှု၊ လောဘ မပါတဲ့ “အကြောင်းတရား” သက်သက်နဲ့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်သွားဖို့ပါ။ ကိုယ့်ဘက်က အရင် စ,ပြီး ပေးဖို့ပါ။ “တန်ရာတန်ကြေး” စပြီး ပေးဖို့ပါ။
“အကြောင်း” ခိုင်လုံရင် “အကျိုး” က ဆုတောင်းစရာ မလိုအောင် ရလာမှာပါ။ လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါ။
ဥပသကာ on January 14, 2010 at 1:02 am said:
အရမ်းကိုကျေးဇူးများတဲ့ ဘ၀နေနည်း ကို သင်ကြားမျှဝေပေးတဲ့ အတွက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောင်လာမဲ့ အပိုင်းသုံးကိုလည်းမျှော်နေပါတယ်ခင်ဗျ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး on January 14, 2010 at 1:03 am said:
ဆရာ့စေတနာကို သဘောမပေါက်သေးတဲ့သူတွေ ရှိနိုင်သေးပေမယ့် အချိန်တချိန်ရောက်ရင် နားလည်လာပြီး ကျေးဇူးတင်သွားကြမှာပါ။
(ပေးသူနှင့်ယူသူနှစ်ဦးတွင် ပစ္စက္ခမျက်စိဖြင့်ကြည့်ကယူသူကရ၏၊ သံသရာမျက်စိဖြင့်ကြည့်က ပေးသူကရ၏)ဆိုတဲ့ ဆရာတော်အရှင်ဇ၀နရဲ့ သြ၀ါဒါအတိုင်း …
ကျေးဇူးရှိဖူးသူတွေနဲ့ ကူညီထိုက်သူတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းဟာ အကျိုးမမျှော်တဲ့စိတ် လောဘကိုသတ်ခြင်း ဖြစ်တာမို့ ဆရာပြောတဲ့ ဘ၀နေနည်းတစိတ်တဒေသကို လိုက်နာကျင့်သုံးခံယူနိုင်မယ် . . .
သမ္မာဝါစာ = မှန်သောပြောဆိုခြင်း။
သမ္မာကမ္မန္တ = မှန်သောပြုလုပ်ခြင်း
သမ္မာအာဇီဝ = မှန်သောအသက်မွေးခြင်း
ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောက်တည်ပြီး ဘ၀ကိုရိုးရိုးလေး ဖြတ်သန်းနိုင်မယ် . . .
ပအရွယ်ပညာရှာ၊ ဒုအရွယ်ဥစ္စာရှာ၊ တအရွယ်တရားရှာဆိုပြီး လက်လွတ်စပယ် ရေးသွားတဲ့ သြ၀ါဒအစား အရွယ်သုံးပါးလုံးမှာ တရားကို နှလုံးသွင်းပြီး ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင် (ဆရာပြောတဲ့ အကျိုးမျှော်စိတ်မပါတဲ့အလုပ်)လောကရဲ့ ကောင်းချီးပေးမှုနဲ့ တစ်ဆုပ်ကြဲလို့ တစ်လှည်းဝင်တဲ့ဘ၀ကို မတောင့်တပဲ ရကြမှာပါ။
စာဖတ်သူအားလုံး ဆရာတင်ဗိုလ်ဗိုလ်ရဲ့ စေတနာကို သဘောပေါက်နားလည်ပြီး သမာဓိမဂ္ဂင်နဲ့ ပညာမဂ္ဂင် ပြည့်စုံတဲ့ ၀ိပဿနာပညာကိုပါ လောကီလူဘောင်ထဲကနေ ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်သာနာပါစေစိတ်မနာပါစေနဲ့ 
taytay on January 14, 2010 at 1:04 am said:
တကယ်.ကို တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဆရာ မျှဝေပေးတဲ.အတွက်ကျေးဇူးပါ ကျင်.သုံးနိူင်အောင်လဲကြိုးစားပါ.မယ်။
red rose on January 14, 2010 at 3:46 am said:
အဖိုးတန်တဲ့ စကားတွေမို့ နာယူမှတ်သား ထားပါ့မယ်…အပိုင်း ၃ကို ဖတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်
aung gyi on January 14, 2010 at 4:28 am said:
Thanks you very much Sayar, for sharing your knowledge and experience.I will try my best to follow .
Joyce on January 14, 2010 at 8:27 am said:
တန်ဖိုး၇ှိသော စကားများမို့ ဝမ်းမြောက်စွာမှတ်သားမိပါတယ်။မှတ်သားလည်းထားပါ့ မယ်။
ဲJoyce လည်းလျှော့ ဖူးပါတယ် လိုချင်စိတ် နဲ့ paln တွေကို။စိုးရိမ်သောက တွေ လျော့ လာတာ ပေါ့ ပါးစွာနေထိုင်ပျော်ရွှင်လာနိုင်တာကိုတော့ ရလာပါတယ်။Plan ချပြီးလုပ်လည်း ဖြစ်မလာသူတွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ကိုယ်နေတဲ့ life style(ဆရာ ပြောသလို)ပိုနှစ်ခြိုက်မိသလိုပဲဆရာ။ဆရာပြောသလိုပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်မှုလေးတွေတောင်အလိုလိုရလာသလိုပဲ။့ ပြန်တွေးကြည့် ရင် plan တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့နှစ်တွေက ကိုယ် မှာတော်တော်ပူလောင်ပြီးခုတော့ ရယ်စရာလိုလိုပဲဆရာ။ဒါပေမဲ့ လောကီလူသားမို့ လားမသိ……….လောဘနည်းသွားပေမဲ့ အရွယ်အလိုက် တော့ရှာဖွေမှု ကြံစည်အားထုတ်မှုတော့ ရှိသေးတယ်ဆရာ။ကိုယ်ရဲ့ plan တွေ၊လောဘလိုချင်စိတ်တွေ လျော့လာတာ ဘယ်လိုသိသာလဲဆိုတော့အကျိုးမမျှော်ပဲ ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာ၊ကျေးဇူးပြုဖူးသူကိုကျေးဇူးဆပ်လိုက်တာ(နှမြေရမဲ့ ပမာဏနဲ့)တွေ လုပ်လာနိုင်တာ တွေ ကြောင့်ပါ။(plan တွေကိုစိတ်ထက်သန်နေရင် ကိုယ့်paln ပျက်စေမဲ့ ကူညီစွန့်ကြဲမှုက တုန့် နှေးခဲ့ ဖူးပါတယ်ဆရာ)။ခု လည်းဒီလကို ဆရာ့ ယတြာယာအတိုင်း(ကြာသပတေးသားသမီးအတွက်အဟော)လုပ်ဖြစ်ပါတယ်(ရန်ကုန်မှာ)။
စာတော်တော်၇ှည်နေပြီ ဖြစ်လို ဆရာနဲ့ အခြားစာဖတ်သူတွေကို တောင်းပန်းပါတယ်။အတွေးအမြင်လေးတူာကာင်းဆရာ့ သဘောထားကိုထောက်ခံမိကြောင်းပြောချင်တာပါပဲ။
colin on January 14, 2010 at 9:16 am said:
thank you, sayar….
may peace be upon you, forever and ever….
miley on January 14, 2010 at 10:17 am said:
ဆရာရေ၊ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဘ၀မှာလည်း တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှော်မှန်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မှန်သမျှ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု
လွဲခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်စေတနာထားပြီး ဘာအကျိုးအမြတ်မှ တကယ်မမျှော်မှန်းပဲလုပ်ခဲ့တဲ့
အလုပ်မှန်သမျှ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကိုအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဆရာ့ဆောင်းပါးမှန်သမျှဟာတကယ့်ကို လက်တွေ့ကျကျရေးထားတဲ့ စာပေကောင်းတွေပါ။အမြဲတမ်းလေးစားလျှက် ။ ဆရာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာစွာနဲ့
Dr.Tin Bo Bo on January 14, 2010 at 10:39 am said:
ချစ်လှစွာသော စာဖတ်သူများ ခင်ဗျား
ဒီဆောင်းပါးကို ရေးစဉ်က အများသူငါ ခံယူကျင့်သုံးနေတဲ့ အယူအဆနဲ့ တခြားစီ ဖြစ်နေလို့ လက်မှလက်ခံပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်များစွာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်(စေတနာ ကြောင့်ပါ)။ အခုလို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူတော်တော်များများက လက်ခံကြတာ/ထောက်ခံကြတာကို တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ် နားလည်သလို၊ တကယ်လည်း ကျင့်သုံး နိုင်ကြပါစေ။
tta on January 14, 2010 at 11:23 am said:
thanks you so much for your sharing valuable knowledge
ု့khin zar on January 14, 2010 at 1:13 pm said:
ဆရာ့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ဆောင်းပါးများမို့ သေချာစွာ မှတ်သားထားပါ့မယ်။ လိုက်နာနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါ့မယ်။ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာထားပြီးဝေမျှမူများအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ပြည့်ဖြိုးကျော် on January 14, 2010 at 1:18 pm said:
sayar…. after i reading the post, i think carefully. It is same like sometime we miss place the things and we want back when necessary, so find carefully ith force but can’t find. but when we do not need and just relax finding, can find at the same place. i think think kind of incident everybody happen before. this is very similar with sayar current post. we need to erase what we want and need to cool down on our mind without desire. it is easy to say, difficult to follow…
ကြယ်စင်မင်း on January 14, 2010 at 1:26 pm said:
ဆရာပြောမှပဲ..ကိုယ့်ကို သတိထားမိလာတော့တယ်.. သေချာပြန်စဉ်းစားရင် .. အားလုံးဟာ ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေချည်းပဲ.. လောဘ ရှိတဲ့အချိန်မှာ မရပဲ… လောဘမပါဝင်တဲ့အချိန်မှာ အလိုလိုရလာတာကို.. ပြန်စဉ်းစားမိရင်.. တကယ်မှန်နေပါတယ်..
ကျေးဇူးဆရာ.. ကျွန်တော်တို့လို့ လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်.
ကျော်မြင့်ဆွေ on January 14, 2010 at 3:12 pm said:
ဆရာရဲ့ယတြာအပိုင်း(၂)ကိုစောင့်မျှော်နေတာပါ။ယခုမှဘဲဆရာရဲ့ဘ၀နေနည်းကို သိရပါတော့တယ် ဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ တစ်ချို့ကလည်း ဒီလို
ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းမလည်း၊ ဘယ်လိုကြီးပွားမလဲဆိုပြီးပြောကြမှာပါဘဲ။ကျွန်တော်တော့ ဆရာရဲ့ယတြာ
Thandar on January 14, 2010 at 3:25 pm said:
ကိုဖုန်း on January 14, 2010 at 3:32 pm said:
တင်ပြသွားတာတွေအားလုံးကို ဖတ်ပြီး ကိုဗိုလ့်ကိုလည်း ပိုနားလည်လာပါတယ်။ စေတနာဟာရောင်ပြန်ဟပ်
တယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ပဲ အဲဒီ့ရောင်ပြန်ကို ကိုဗိုလ့်အနေနဲ့ များစွာရရှိနေပြီလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီ့ထက်မြင့်တဲ့ ဥာဏ်စဉ်အထူးကို ချဉ်းကပ်သိမြင်ဆင်ခြင်နိုင်သော ချမ်းသာအမှန်၏လမ်းကို တက်လှမ်း
နိုင်သော ခရီးသည်တစ်ဦး အဖြစ် ဖြစ်ပါစေလို့ ။
natnatkhat on January 14, 2010 at 4:51 pm said:
ဆရာ တင်ပြ၊ ပြောပြ သွားတာတွေ ကို ထောက်ခံပါတယ်။။ လောက မှာ လောဘ နဲ့ ပြီး တယောက် နဲ့ တယောက် စေတနာ များများထားနိုင်ကြပါစေလို့ စုတောင်းရင်..ဆရာရဲ့ အပိုင်း ၃ ကို စောင့်စားလျှက် ပါ။။။။။
Dr.Tin Bo Bo on January 14, 2010 at 4:56 pm said:
မှန်ပါတယ် ကိုဖုန်း ရေ
ကနေ့ကတော့ ဘ၀မှာ အမှတ်တရဖြစ်မယ့် နေ့လေးဖြစ်သွားပါပြီ။ ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာကို လူအများလက်ခံမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့မေတ္တာကို ကျွန်တော် ကနေ့ ရလိုက်ပါတယ်။ အတော်လည်း ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ ဒီကွန်းမန့်တွေကို ဖတ်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲ ဆိုတော့“ကိုယ် နို့ချိုတိုက်ကျွေးတာကို ကျေနပ်စွာ စို့နေတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးကို တစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေတဲ့ မိခင် တစ်ယောက်လို” ခံစားရပါတယ်။ ဒီမိခင်ဟာ ဒီကလေးဆီက ဘာလိုချင်လို့လဲ မေးရင် ဘာမှမလိုပါဘူး။ ကိုယ်တိုက်ကျွေးနေတဲ့ နို့ကို နှစ်ခြိုက်စွာခံယူစားသုံး နေတာကိုဘဲ ပီတိဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်ပေးချင်တာကို သူတို့ ကျေကျေနပ်နပ် ယူလိုက်ခြင်းထက် ကျေနပ်စရာကောင်းတာ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။
မိတ်ဆွေအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ။
ချောစု on January 14, 2010 at 5:52 pm said:
အပိုင်း ၃ ကိုစောင့်မျှော်လျှက်
Zaw Min Tun on January 14, 2010 at 6:00 pm said:
ဆရာ့အယူအဆကိုလက်ခံပါတယ်ဆရြ၊ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာစစ်ပွဲတွေ၊သတ်ဖြတ်ဗုံးခွဲမှုတွေ၊ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊စတာတွေဟာလောဘ၊ဣသာမစ္ဆရိယ နဲ့ မာနတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ဆရာ။ ဆက်ပီးဝေမျှပေးပါအုံးဆရာ။ အကျိုးများပါတယ်၊
min thit on January 14, 2010 at 6:15 pm said:
ဆေးကျောင်းကို တစ်မှတ်နဲ့ကပ်လွဲခဲ့တုန်းက တော်တော်ဝမ်းနဲ ခဲ့ဘူးပါတယ်။အခု သူငယ်ချင်းဆရာဝန်တွေ စီးပွားရေးမပြေလည်ကြတာကို တွေ့ရတော့ ဆေးကျောင်းနဲ့ကပ်လွဲခဲ့တာကိုဘဲ ကံကောင်းတယ်ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ အခု အင်ဂျင်နီယာဘ၀မှာနဲ့ဘဲ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကျေနပ်နေပြီး ငယ်ငယ်က ရည်မှန်းချက် လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ကံတရားကို ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ မှန်ပါတယ် ဆရာ ။ ရည်မှန်းချက်ကြီးတိုင်းလဲမကောင်းသလို ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်လာရင်လည်း ကောင်းမယ်ပြောလို့မရပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . ဆရာ။
Moe on January 14, 2010 at 7:10 pm said:
Thanks you very much and much appreciated for sharing this valuable knowledge to us.
Of course, If we know what is cause, then we have to follow correct way of life style as you written.
Really appreciated to you.
Ei Ei on January 14, 2010 at 7:12 pm said:
I was waiting your articleafew days ago, and I’m very happy to read your valuable advice on this article.
moez on January 14, 2010 at 7:56 pm said:
ကောင်းလိုက်တာဆရာရယ် . .လို့ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ရေရွတ်မိပါတယ် ဆရာ . . .
. . ဆရာ့ရဲ့ . . သစ္စာဆိုချက် . . မုချအောင်မြင်ပါစေ . . ဆရာ . . .
တဖြောင့်တည်းသော ရှင်းလင်းကြည်လင်နေတဲ့ စိတ်နဲ့ အရာရာကို ရှုမြင်သုံးသပ် လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် . . အားလုံးဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ထူးထူးလည်လည် အဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်မှာပါ . . . .
NN on January 14, 2010 at 8:22 pm said:
အဖိုးထိုက်တန်သော ဆရာ့ Post ကိုဖတ်ပြီး အတိုင်းမသိ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ တစ်ဘ၀လုံး ဆရာပြောသလို ကျင့်သုံး လိုက်နာ နေထိုင်ရန် ကြိုးစားရင်း ဆရာ့အား ထာဝရ လေးစားကျေးဇူးတင်နေပါမည်။ လူအများ ဘ၀အား အေးချမ်းစေလိုသော ဆရာ၏ ကျန်ရှိသော ဘ၀နှင့် သံသရာ တစ်လျှောက်လုံး ထာဝရ အေးချမ်းသော ဘ၀မျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဆရာရှင်။
san on January 14, 2010 at 8:28 pm said:
tpph on January 14, 2010 at 9:00 pm said:
တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆောင်းပါးလေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ အပိုင်း(၃) ကိုစောင့်မျှော်နေပါမယ်ဆရာ။
poparkyi on January 14, 2010 at 9:48 pm said:
ရေးထားတာတွေ-idea တွေအရမ်း ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပုထုဇဉ် ကိုမပြောပါနှင့်အုံး
ရဟန်းတော်တွေတောင်မ ဘဏ်စာအုပ် ၊ကား နှင့့် handphone တွေနှင့်ဆိုတော့
လောဘ = ???????????? ဆိုတယ့် meaning.
dr.tin bo bo on January 15, 2010 at 6:53 am said:
လူနှစ်ယောက် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပြီး တစ်ယောက်က “ပ,စောက်”ကွ၊ နောက်တစ်ယောက်က “ဂ,ငယ်”ကွလို့ ငြင်းခုံနေတာမျိုး မလုပ်ချင်ပါ။ ခင်ဗျားလည်း ခင်ဗျားအယူအဆနဲ့ခင်ဗျား မှန်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် “ရဟန်းတော်တွေ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးထက် “ရဟန်းတော်အချို့” ဆိုရင် ပိုပြီးသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ “တကယ်စစ်မှန်တဲ့ရဟန်း” တွေလည်း အသေအချာရှိနေတယ်။ ကိုယ်က “ရဟန်းတော်တွေ” ဆိုပြီး “အုပ်” ထဲ့လိုက်တော့ ဒီထဲမှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ရဟန်းတစ်ဦးမျှပါသွားရင် “သံဃဘေဒက ကံ” ဆိုတဲ့ “သံဃာကို စွပ်စွဲတဲ့ကံကြီး” ထိုက်သွားပြီး မဂ်/ဖိုလ်ကိုပါ ပိတ်သွားတတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ(အစစ်)ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ဘာသာခြားဆိုရင်တော့ မပြောလိုပါဘူး။ မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်နိုင်ပါစေ။
Si Si on January 15, 2010 at 8:30 am said:
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘ၀နေနည်းတစ်ခုပါပဲဆရာ။ ဆရာ့ ရဲ့အမြင်ကို ထောက်ခံပါတယ်။ အပိုင်း(၃) ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ဆရာနှင့် ဆရာ့ မိသားစု အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာကြပါစေလို့နှစ်သစ်ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
happy on January 15, 2010 at 12:58 pm said:
I am really appreciate to you.
Just yesterday, I decided to start to meditation.
I try to live without greedy.
Thanks you for sharing your idea.
ချစ်ကြော့လေး on January 15, 2010 at 2:41 pm said:
ဘ၀နေနည်းဆိုတာ လူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် ဒီလိုဆရာရဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းစေတနာ
ဒီထက်လဲဆရာ့ရဲ့ အပိုင်း(3) ကိုစောင့်မျှော်နေပါ့မယ်
သမီးရဲ့မိဘတွေအတွက်ပေးဆပ်မှုသက်သက်ပါ ဒါကြောင့်ထင်တယ် သမီးကအလုပ်မှာသူများတွေထက်ကို အဆင်ပြေပါတယ် ဘာပဲလုပ်လုပ်သူတော်ကောင်းနဲ့ ပဲတွေ့ ရပါတယ်
U Kyaw Swar on January 15, 2010 at 3:11 pm said:
That is good life style. Thank you.
Mary on January 15, 2010 at 4:08 pm said:
Sayar !It isavery precious post . I will follow & try my best as much as i can . It is “the best life style”you point & show us. Thanks for sharing all your knowledge & experience.
tpph on January 15, 2010 at 8:24 pm said:
No. ၂၉ မှာ ရေးထားသူပါဆရာ။ အဲ့မှာ ဘေးနားက ပုံ လေးက သူများတွေနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆရာ။ အဲ့ပုံလေးက ကျွန်မမှာရှိပါတယ်ဆရာ။သိချင်ယုံပါ။ အနှောက်အရှက်ဖြစ်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။
dr.tin bo bo on January 15, 2010 at 8:25 pm said:
အဲဒါ ဆရာလည်း မသိဘူး။ ဆရာတောင်မှ ဘယ်လိုလုပ်ထည့်လဲ ဆိုတာ မေးမလို့။ ဆရာက Web Knowledge က ဘာမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ မပြောတတ်ဘူး။ အင်တာနက်နဲ့ပက်သက်ပြီး မသိတာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။
ပေါက်ပေါက် on January 15, 2010 at 8:48 pm said:
အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ်ပါ။ အပိုင်း ၃ ကိုလည်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
ဆရာနှင့် မိသားစု ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။
chomaw on January 16, 2010 at 12:38 am said:
Ko Tin Bo Bo, All are thanks to you.Congratulation! I also agree with you.See your post 3.
စန်းစန်းဝင်း on January 16, 2010 at 8:21 am said:
tpph on January 16, 2010 at 8:33 pm said:
ဟုတ်လားဆရာ။ ကျွန်မလည်းမသိလို့မေးကြည့်တာပါ။ သိတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပါအုံးမယ်ဆရာ။
ကိုထွန်းထွန်းဝင်း on January 16, 2010 at 8:38 pm said:
အချက်အလက်တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ကို
ဆရာတင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရမ်းကို ကောင်း
ပါတယ်။ သတိမပြုမိတဲ့အရာတစ်ခုကို၊ စိတ်ဝင်စားစရာ(ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ဦးအတွက်)
ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုအဖြစ် တင်ပြထားတာ ကောင်းပါတယ် ဆရာ။
မိသားစု စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ ရှိပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက် …
aungmin on January 17, 2010 at 3:28 am said:
thetwinoo on January 17, 2010 at 1:10 pm said:
I am very pleased with this post and appreciate .
Thank for sharing yr opinions and experiences.
chomaw on January 17, 2010 at 5:19 pm said:
Ko Tin Bo Bo, I read again, I do agree with you.Pls take care your health.
zaw on January 17, 2010 at 9:13 pm said:
ဆရာ ရဲ့ စေတနာ နာနင့် ရေး ထား တဲ့ဆောင်း ပါး က အရင်း ကောင်း ပါ တယ် ဆရာလည်း ဒီဆောင်း ပါး မှလူ အများ ခံ စား ရ သောစေတနာနင့်အတူ ထပ်တူ ခံ စား ရ ပါ စေ လို့မေ့တာပို့လိုက်ပါတယ်
ဒါပေ မေ့ ဘဝ ဆို ဒါ ကိုယ်ဖြစ် ချင်ဒါ ဟာ များသော အားဖြင့် ဖြစ်မလာ ဒါ များပါ တယ် ဆရာပြော သလို အားလုံး ကိုစွန့် လွတ် ရ ဖို့နေ နိုင် အောင် ကြိုး စား ရ ဦး မေ
Aung on January 18, 2010 at 2:59 am said:
ဆရာရဲစာဖတ်ရင်း Bill Gatets ပြောခဲတဲစကားတချို.ကိုသွားအမှတ်ရပါတယ်။ သူက “computer”PC (personal computer) စလုပ် တီထွင်တုန်းက သူကလူတိုင်း ကွမ်ပြုတာ ပိုင်ဆိုင်နိူင်အောင်ဆိုတဲ စေတနာရည်ရွယ်ချက်ထားခဲတယ် တဲ။ ဘာလိုဆိုတောအဲဒီအချိန်တုန်းက computer တွေကတော်တော်ဈေးကြီးပြီးပိုင်ဆိုင်ဖိုဆိုတာ လူတိုင်း မစဉ်းစားနိုင်တဲအခြေအနေမှာပါ။။ ပြီးရင်ကျွန်တော်.အဖေပြော ခဲတဲ စကားတခုက “ဘာပဲလုပ်လုပ်ပေး စေတနာနဲလုပ်ပေးလိုက်၊ ဘာအကျို:မှမျှော်လင့်နဲ.တဲ” ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ
dr.tin bo bo on January 18, 2010 at 3:00 am said:
မှန်တယ် ကိုအောင် ရေ
ကျွန်တော်က ဆောင်းပါး သိပ်ရှည်မှာ စိုးလို့ အများကြီး ရေးမပြတာပါ။ ဒီလို အလုပ်တစ်ခု “စေတနာသက်သက်နဲ့” လုပ်လိုက်ရာကနေ မမျှော်လင့်ဘဲ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့လူတွေ အမြောက်အများ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ရလာတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်မှုဟာ တည်ငြိမ်မှုလည်း ရှိတယ်။ (လောဘနဲ့ ရှာတဲ့သူတွေလည်း မရဘူးမဟုတ်ပါဘူး၊ ရတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြန်ကုန်ကြတာပါဘဲ)။ အလွန် သင်္ခန်းစာယူဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဝေဖြိုး on January 18, 2010 at 12:29 pm said:
ဆရာ … ဟောစာတမ်းတွေကို အခမဲ့ပေးနေတဲ့ ဆရာ့စေတနာကို လေးစားပါတယ်။ စေတနာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ။ ကျနော်ယုံတယ်။
ဆရာ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရလို့ အသိတိုးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
ဇော်မင်း on February 23, 2010 at 9:34 pm said:
Dawn on July 6, 2011 at 11:18 pm said:
တွေးနေမိနေတယ်။ မှောင်လွန်းတဲ့အချိန်မှာ အလင်းတချို့ကိုမြင်နိုင်တာ မဟုတ်လား။ လိုချင်တာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆို.. လုပ်သမျှဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ သာယာမှုနဲ့ ဘုရားတရားမေ့တာ၊ မာန်တက်တာမျိုးဖြစ်တယ်လေ။ မှောင်မိုက်နေတဲ့ ဘ၀အခြေအနေမှာသာ.ကယ်တင်ရာရှာရင်း .တရားရဲ့ အလင်းတန်းတွေကို မြင်နိုင်လာတာမို့ ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ ကံဆိုးတာကပဲ အသုံးချတတ်ယမ်ဆို ကံကောင်းခြင်းတမျိုးလားလို့။
su su on July 7, 2011 at 1:35 pm said:
ဆရာ websites အားတွေ့ရ၍အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျမ၏မွေးနေ့မှာ 1963,october,15,tuesday ပါဆရာ။ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ.ဂဏန်းက 27 ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာ နဲ့ မိသားစုများ
ကိုယ် စိတ် နှစ်ပါး ကျန်းမာ ချမ်းသာစေကြောင်း
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,839)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,990)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,874)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,402)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,462)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,593)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,618)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,980)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,310)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,274)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,111)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,055)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,847)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,814)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,304)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,139)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,506)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,192)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,684)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,668)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,554)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,269)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,246)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,913)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,703)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,031)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !